बाहिरी बारबेक्यूको सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो?
बार्बेक्यु पार्टी र मनोरन्जनको व्यक्तिहरूको मनपर्ने तरीका हो। व्यक्तिहरू आफ्नै बगैचामा आउटडोर बार्बेक्यु निर्माण गर्न वा वनमा आउटडोर बारबेक्यु स्थापित गर्न सक्छन्। तर एक राम्रो आउटडोर बारबेक्यू योजना गर्न, त्यहाँ धेरै कुरा विचार गरिनु पर्छ। तपाइँले मौसम सूचना जाँच गर्नु पर्छ ...
समुद्री किनार कुर्सीका फाइदाहरू के हुन्?
समुद्री किनार कुर्सी बिना, कसरी मानिसहरूले घाम र समुद्र किनारको मजा लिन सक्छन्? सान्त्वना भावना प्रदान गर्न, समुद्र तट कुर्सीको डिजाइन मानव शरीर वक्र र यसको आफ्नै भौतिक सम्पत्ती अनुरूपको सिद्धान्तमा आधारित छ, यसले समग्र संरचना र बहाव लि को सहजतामा पनि जोड दिँदै ...
कोरोनाभाइरसको बिरूद्ध हालको मास्कहरू के छन्
१.उपयोगयोग्य मास्क जसले उपन्यास कोरोनाभाइरस डिस्पोजेबल Lay लेयर गैर बुनेको अनुहारको मास्कको विरूद्ध सक्षम हुन सक्छ: यसले केही हदसम्म श्वासप्रश्वासको संक्रमणबाट सुरक्षा प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ, तर कुहिर वा धुन्धलाई रोक्न सक्दैन। N95 प्रमाणित फेस मास्क: यसले सुरक्षा प्रदान गर्न मात्र सहयोग गर्न सक्दैन ...